Kaalinta dumarka soomaaliyeed ee arrimaha bulshada - مركز الكتاب للبحوث والدراسات
نشرت بواسطة: حواء علي محمد في بحوث 10 يناير، 2019	0 370 زيارة
Xaawo Cali Maxamed, Qoraa
Qormadaan waxay ka hadlaysaa ‘kaalinta dumarka soomaaliyeed ee arrimaha bulshada’, waxaa lagu iftiiminayaa mugga iyo macnaha kaalintaas, si xog cilmi ah looga helo arrimahaas, waxaa loo adeegsaday qormadaan manhajka wasfiga (المنهج الوصفي).
Ugu horreyn qoraagu waxay ka hadlaysaa dumarkii hore iyo kaalintoodii bulshada ay ku lahaayeen ee arrimaha bulshada, sida hiddaha iyo dhaqanka, masuuliyadda guriga, siyaasadda iyo gobanimo doonka, caafimaadka, iyo guubaabada bulshada.
Waxay muujisay tilmaamaha kaalinta dumarka ay ku leeyihiin arrimaha bulshada, iyadoo u kala qaadday qeybo kala duwan, sida barbaarinta, tarbiyadda, caafimaadka, waxbarashada, gargaarka, iwm.
Waxay tilmaantay in dumarku kaalin muuqata ku lahaayeen, kuna leeyihiin barbaarinta ubadka, iyagoo masuuliyadda tarbiyadda lagu halleeyo inta badan, culayskaasna ay dusha saartaan, si taas lamid ahna waxbarashada nidaamiga ah ka dhex muuqdaan macallinimo ha noqoto, ama iskuullo iyo macaahid u gaar ah dumarka ha noqotee.
Sidoo kale dacwada iyo faafinta diinta ayey kaalin ku leeyihiin, gaar ahaan muxaadarooyinka dumarka u gaar ka ah, guubaabada bulshada ayaa ka mid ah goobaha kaalintoodu ka muuqato, iyo gargaarka gaar ahaan tabarucaadka masaajidda laga ururiyo.
Caafimaadka bulshada ayaa kamid ah goobaha ugu muhiimsan ee kaalinta dumarku ka muuqato, sida ummulisooyinka, kalkaalisooyinka, iyo dhakhaatiirta gabdhaha ah.
Ugu dambeyn waxaa kasoo baxday qormadaan in dumarku ku leeyihiin bulshada kaalin muuqata, gaar ahaan arrimaha bulshada.
soomaaliyeed الصومالية	2019-01-10
الوسوم :soomaaliyeed الصومالية
السابق: قصص القرآن (دراسة في الأساليب القصصية وفوائدها)
التالي: 365 فرصة لتحقيق أحلامك